Momba anay - Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 1998 ny orinasa
Manana mpiasa 150 sy teknisianina 50 ny orinasa
Manana traikefa amin'ny famokarana mihoatra ny 20 taona
Manana patanty omen'ny fanjakana mihoatra ny 20, patanty eken'ny maro
100 tapitrisa sandan'ny vokatra isan-taona
Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.dia natsangana tamin'ny taona 1998. Ny isan'ny mpiasa ankehitriny dia mihoatra ny 150 izay ahitàna maherin'ny 50 mahery. Nandritra ny taona maro, nanolo-tena izahay tamin'ny fikarohana siantifika sy ny famokarana fonosana vy ho an'ny singa elektronika. Miantehitra amin'ny teknolojia manokana hampiroboroboana fonosana sivily. Mikaroka tsena any ampitan-dranomasina izahay ary mahavita fampandrosoana maharitra.
Manana teknolojia matanjaka ala izahay vondronà mpiasa za-draharaha sy injeniera siantifika manana fahaiza-manao fampandrosoana. Ary manana teknika matotra izahay amin'ny famolavolana fonosana vy sy fampitaovana fitaovana feno hanaovana fizahana famokarana. Manana patanty fampandrosoana maherin'ny 20 an'ny fanjakana nahazo alalana sy patanty nomem-boninahitra maromaro izahay. Izahay dia ekena ho orinasam-panjakana avo lenta.
Ny vokatra lehibe dia misy fonosana metaly ho an'ny boriborintany mifangaro hybrid, singa opto-elektronika, singa mikraoba, singa sivana onja, singa sensor ary fitaovana avo lenta.
Transistor Outline Package, ny entana (antsoina hoe TO) dia ampiasaina amin'ny dacades maromaro. Izy io dia efa lasa fenitra indostrialy, mifehy ny endrika sy ny refy hifehezana ny fonosana elektronika. TO fonosana TO dia misy singa roa: Header sy cap. Header dia ho an'ny signal elektrika an'ny singa fonosana. Raha ny cap dia miantoka ny fahombiazan'ny famindrana ireo signal optika. Anisan'izany ny emitter Optical (toy ny fitaovana laser) sy ny mpandray (toy ny detector).
TO header (fantatra koa amin'ny anarana hoe header) dia manome fototra mekanika ho an'ny semiconductor ho toy ny s Assembly, diode lasser na circuit tsotra ary toy izany koa ireo singa elektronika sy optika.
Manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana isika, afaka manome ny vokatra rehetra izay volavola sy refy mahazatra. Izahay dia mizatra mankany amin'ny lohan'ny mpanjifa. TO header dia mifanitsy amin'ireo satroka TO mba hamoronana compontents misy tombo-kase voaisy tombo-kase tanteraka, miaro ny mpiorina amin'ny fepetra azo antoka hahazoana antoka fa miasa ara-dalàna.
Amin'ny fampiharana Optical, TO header dia ampiasaina amin'ny fampiharana nentim-paharazana, ary mampihatra ihany koa ny emitter TOSA sy ny mpandray ROSA ho an'ny transceiver, koa ny famindrana ny fidirana haavo sy ny mena Infra mena sns.
Amin'ny lohan-doha sandoka. Miorina amin'ny fomba teknolojia amin'ny ankapobeny ny fitaovana metaly. Ny tombo-kase fametahana dia vita amin'ny Steel Rolled Steel (Toy ny AISI1010). Raha toa ka ny Kovar (ASTM-F15) sy ny firaka 52 (ASTM-F30) no tena ampiasain'ny tombo-kase.
Ny toeram-pamokarana rehetra ao amin'ny orinasanay dia mandalo ny fanamarinana ISO9001 ary ny lohateny TO rehetra dia manaraka ny fenitra ROHS.
Manana patanty fampandrosoana maherin'ny 20 an'ny fanjakana nahazo alalana sy patanty nomem-boninahitra maromaro izahay. Izahay dia ekena ho orinasam-panjakana avo lenta.
Ny orinasa dia manana tsipika teknolojia famokarana matotra ary fitaovana fanandramana matihanina tanteraka.
Ny tsipika famokarana eletronplate
Ny tsipika famokarana eletronplate-Workshop
Toerana famokarana atrikasa R&D
Toerana famokarana fanaraha-maso akorandriaka
Fitaovana fandrefesana sary
Fandrefesana ny hateviny
Mpanadihady tambajotra Vector
Izahay ekipa Jitai dia mifikitra hatrany ary mandroso ny toe-tsaina "pragmatika, mahitsy, mahomby ary manavao", ary manaraka ny fanoloran-tena "vokatra tsara, serivisy tonga lafatra", dia raisinay ny fotoana hiarahanay miasa aminao ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa.